JW Ushumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu July 30–August 5, 2018
“Mufananidzo Wemwanakomana Mupambadzi”: (10 min.)
Ru 15:11-16—Mumwe mwanakomana akapambadza nhaka yake achirarama upenyu hwakaipa (“Mumwe murume akanga aine vanakomana vaviri,” “muduku wavo,” “akapambadza,” “upenyu hwakaipa kwazvo,” “kuti anofudza nguruve,” “mateko emakarobhu” tsanangudzo dzemamwe mashoko Ru 15:11-16 nwtsty)
Ru 15:17-24—Akazopfidza uye baba vake vakamugamuchira (“ndakakutadzirai,” “vanhu vemaricho,” “vakamutsvoda zvinyoronyoro,” “kunzi mwanakomana wenyu,” “nguo refu . . . rin’i . . . hwashu” tsanangudzo dzemamwe mashoko Ru 15:17-24 nwtsty)
Ru 15:25-32—Mafungiro emwanakomana mukuru akagadziriswa
Ru 14:26—Muvhesi iyi, shoko rekuti ‘kuvenga’ rinorevei? (“kuvenga” tsanangudzo dzemamwe mashoko Ru 14:26 nwtsty)
Ru 16:10-13—Jesu aida kuti vadzidzi vake vazivei ‘nezvepfuma isina kururama’? (w17.07 8-9 ¶7-8)
Kuverenga Bhaibheri: (4 min. zvichidzika) Ru 14:1-14
Paunodzokera Kechipiri: (3 min. zvichidzika) Shandisa mharidzo yekuenzanisira. Koka munhu wacho kumusangano.
Paunodzokera Kechitatu: (3 min. zvichidzika) Shandisa rugwaro rwaunoda, uye mupe rimwe remabhuku atinoshandisa pakudzidzisa vanhu Bhaibheri.
Chidzidzo cheBhaibheri: (6 min. zvichidzika) lv 32 ¶14-15
“Mupambadzi Anodzoka”: (15 min.) Kukurukurirana. Tangai nekuratidza vateereri vhidhiyo inonzi Mupambadzi Anodzoka—Nzwisa.
Chidzidzo cheBhaibheri Cheungano: (30 min.) jy chits. 31
Rwiyo 139 Nemunyengetero
Purogiramu yeUshumiri Hwedu Uye Kurarama kwechiKristu yaJuly 30–August 5, 2018